ဖြည့်စွက် - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ကျနော်တို့ဆရာဝန်များကမရှိကြပေ။ အောက်ကအကြံပေးချက်များ site ကိုအဖွဲ့ဝင်များမှ လာ. , သင်ကသူတို့ကိုမဆိုကြိုးစားမီသင့်ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူတို့နှင့်အတူစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
လူတွေကမကြာခဏသူတို့ရဲ့လိင်စိတ်ဖြေလျှော့ဖို့တစ်ခုခုယူမှ, ဒါမှမဟုတ်အပြန်အလှန်ကြောင့်နိုးထဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများမေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ရိုးရှင်းစွာဤနေရာတွင်သူတို့ကိုပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့သဘာဝကျကျဆက်ရေးဖို့ဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးပြန်လာ၏ဖြစ်စဉ်ကိုခွင့်ပြုအကြံပြုပါသည်။ ဒါဟာအချိန်ကြာပေမယ့်ရလဒ်တွေကိုပိုမိုတည်ငြိမ်ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျဟိုစတီရွိုက်ကိုယူပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်း, ကြည့်ရှု ဒီပစ္စည်း။
Psychiatry နှင့်အာရုံကြောထဲမှာ N-acetylcysteine ​​၏လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ: တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု (2015)
Curcumin - စီးပွားပျက်ကပ်တစ် Novell ကုသမှုအခြားရွေးချယ်စရာ
သင့်ရဲ့ reboot ကိုအရှိန်မြှင့်စေခြင်းငှါ hogus '' ဖြည့်စွက် / မူးယစ်ဆေးဝါးစာရင်း
များစွာသောမူးယစ်ဆေးဝါး & ဖြည့်စွက်နှင့်အတူစမ်းသပ်တဲ့သူ rebooter အားဖြင့် post
“ Psychogenic ED” အတွက် Sulbutiamine
တဏှာလျှော့ချရေးတို့အတွက် NAC: အဆိုပါ NoFap အစီရင်ခံစာ, အပိုင်း 1 ဖြည့်စွက်